पारियात्र र महामेरु- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
सय वर्षमा सत्यमोहन : एक पलमा एक सदी
यही २०७६ साल वैशाख ३० गते ९९ वर्ष पूरा गरी सय वर्षको शुभजन्मोत्सव मनाउन उदाउने बिहानी सूर्य भगवान्ले सत्यमोहन जोशीको जीवन शौर्यलाई थप ऊर्जा प्रदान गरून् ।
वैशाख २८, २०७६ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
सय वर्ष अर्थात् एक शताब्दीको उमेर बोकेर बाँचिरहेका धेरै मान्छे हुन्छन् यो संसारमा । तर, स्वस्थ, सचेत र सारगर्भित जीवन थोरैले मात्र बाँच्न सफल भएका हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रत्येक पलमा एक सदी बाँच्न सक्ने मान्छेको इहलीला भने श्री सत्यमोहन जोशीमा प्रत्यक्ष हुन्छ । उहाँलाई भेट्ने हरेक मान्छेले उहाँको प्रत्येक पलको महत्त्व यसैगरी बुझ्दछ ।
भर्खरै पनि नागरिक नायक बनेर आफ्ना भाव र प्रभावले नेपाली नागरिक समाजमा उहाँले थप ज्योति छर्नुभयो । त्यसको लगत्तै नेपाल ललितकला पत्रकारिता समाजले पनि विशेष सम्मानसहित पुरस्कृत गर्‍यो ।
उहाँले प्राप्त गर्नुभएका मान, सम्मान, पुरस्कार, तक्मा, पदवी, प्रशंसापत्र एवं अलङ्कारहरूका साथै उपहारहरू र उहाँकोमा सञ्चित हुन आएका पुस्तक, पुस्तिका, पत्र, पत्रिका, लेख र अभिलेखहरूको भौतिक संगालोबाट एउटा गहकिलो संग्रहालय म्युजियम बन्न सक्छ । एउटा राष्ट्रिय सम्पदा निर्माण हुन सक्छ ।
सत्यमोहन जोशी स्वयं एक जीवन्त सम्पदा हो र राज्यले पनि उहाँलाई २०७४ सालमा नै ‘वाङ्मय शताब्दी पुरुष’ को उपाधिबाट सुशोभित गरिसकेको छ । उहाँको नामको अगाडि र पछाडि ‘डाक्टर अफ लिटरेचर’ (महाविद्यावारिधि) लगायत थुप्रै अलङ्कारहरू जोडिएका छन् । तिनलाई थाप्न कार चढेर कार्यक्रमस्थल जान थालेको मात्र २ वर्ष भयो । नक्र कार्यत्रमस्थलमा खुट्टैले हिँडेर आउने–जाने कीर्तिमानी ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा पनि स्थापित नाम हो सत्यमोहन जोशी ।
हुन त जब पुग्यो ६० तब हातमा लाठी भन्ने नेपाली उक्ति अझै प्रचलित छ तर सय वर्ष पुग्दा पनि उहाँले लठ्ठी समाएर हिँड्नुभएको छैन न त चस्मा लगाएरै भाषण गर्नुभएको छ । उहाँको शारीरिक तन्दुरुस्ती र जाँगरलाई पूर्णतया साथ दिने उहाँको स्मरण शक्ति पनि हो । सबै इन्द्रियहरू सक्रिय छन् ।
यही २०७६ साल वैशाख ३० गते ९९ वर्ष पूरा गरी सय वर्षको शुभजन्मोत्सव मनाउन उदाउने बिहानी सूर्य भगवान्ले उहाँको जीवन शौर्यलाई थप ऊर्जा प्रदान गरून् । स्वस्थ एवं समृद्ध सत्यमोहन जोशी हामीमाझ चिरायु रहून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
शब्द संयोजन शतांकले २०६९ साल भदौमा ८ सय ४८ पृष्ठको जोशी विशेषांक प्रकाशन गरेर नेपालका १ सय ४१ जना प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार एवं नागरिक अगुवाहरूबाट उहाँको व्यक्तित्व र कृतित्वबारे प्रकाश पार्ने काम भएको थियो । त्यो झन्डै ५ वर्ष पहिलेको कुरा भयो । त्यही ५ वर्षभित्रको अवधिमा उहाँले पुर्‍याएको थप योगदानको चर्चा गर्‍यौं भने अर्को ८ सय ५० पृष्ठको ग्रन्थ बन्न सक्छ । पुस्तक विमोचन र अनावरणको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि थुप्रै सामग्री प्राप्त हुन्छ । उहाँले लोकार्पण गरेका पुस्तकबारे उहाँको विश्लेषण, विवेचना र समालोचनाहरू निकै उपयोगी हुने गरेको छ र हुन्छ पनि । पुस्तकको घुम्टो खोल्ने काममा मात्र सीमित हुने प्रमुख अतिथि सत्यमोहन होइन । एउटा घटना यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
हालै २०७५ को फागुन ११ गते ‘केशरबहादुर आचार्यका सम्झनाहरू’ नामक एक स्मृतिग्रन्थको लोकार्पण कार्यक्रम थियो । केशरबहादुर आचार्य सत्यमोहन जोशीको दौतरी मात्र नभई कलेजमा शिक्षा र सरकारी सेवाका प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै सँगसँगै कार्यक्षेत्रमा उत्रेका साथी पनि थिए ।
त्यसैले होला पुस्तक विमोचन कार्यक्रम सत्यमोहनज्यूकै घरमा आयोजना गरिएको थियो । बिहान ११ बजे नै सुरु गर्ने निश्चय भएको कार्यक्रममा १०ः४५ बजे बखुंबाहाल ललित पुगें । सत्यमोहनका ९७ वर्षीया श्रीमती र ७० वर्षका छोराको मात्र त्यहाँ उपस्थिति थियो । दाइलाई बिहान आठै बजे बोलाएर लानुभएको छ । त्यो पनि बालाजुसम्म टाढा । आउन ढिलो हुन्छ होला भनेर भाउजूले भन्नुभो । सत्यमोहनज्यूको समय उहाँको हातमा छैन भन्ने प्रस्ट भयो ।
मेरा लागि अचम्मको कुरा । अक्सर कुनै कार्यक्रममा पनि ढिला नपुग्ने कीर्तिमानी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । ‘घरकी मुर्गी दाल बराबर’ भनेझैं घरकै कार्यक्रम त हो नि भन्ने सोच्नुभयो होला वा के होला थाहा भएन । उहाँ १२ः४५ बजे फुर्तीसाथ हस्याङफस्याङ गर्दै लम्केर आइपुग्नुभयो । लगत्तै त्यहाँ सजाइएको डवलीमा पुगेर कार्यक्रमको तुरुन्त थालनी गर्न लगाउनुभयो । केशरबहादुरको स्मृतिमा लगभग ३० मिनेट धारावाही बोल्नुभो ।
उहाँको त्यो प्रवचनबाट थाहा पाइयो कि श्री ३ जुद्धशमशेरको पालामा नेपाल कस्तो थियो । कसरी जागिर पाइन्थ्यो । विकास प्रयास कसरी हुन्थ्यो आदि इत्यादि । भारतको कलकत्ताबाट एमकम पास गरेर आएका भीमबहादुर पाँडेलाई उहाँका पिताले श्री ३ समक्ष दाम राख्न लगेछन् ।
कुनै प्राप्तिको स्याबासी वा अनुमोदनको त्यो चलनअनुसार श्री ३ ले भीमबहादुर पाँडेलाई ‘प्रोफेसर भइस्’ भनी हुकुम भएछ । किताबी सुब्बाले नाम पनि दर्ता गरिएछ । त्रिचन्द्र कलेजमा प्रोफेसर भएर जाँदा त्यहाँ कमर्स विभाग नै स्थापना भएको रहेनछ । तालुकवाला जर्नेल मृगेन्द्रशमशेरले उहाँलाई नयाँ कार्यभार सुम्पनुपर्‍यो । त्यो कार्य थियो पूर्व १ नम्बरको औद्योगिक सर्वेक्षण गर्ने ।
भीमबहादुरले तिमालगाउँमा केन्द्रित भएर विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेछन् । त्यस ठाउँको प्रसिद्ध उत्पादनहरू जस्तै ः सावरको छाला, एककाले पलाञ्चोके जुत्ता, रातो कोकिटा रङको स्थानीय कपास, कपडा बुन्ने सीप, कृषिबालीनालीका विवरण विशेषगरेर सुन्तला खेतीको सम्भाव्यता तथा समग्रमा भूउपयोगको विस्तृत वर्णनलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार भएछ । त्यसबाट श्री ३ जुद्ध, चिफ साहेब पद्मशमशेर लगायत सबै उच्चपदस्थ राणाजीहरू निकै प्रसन्न भएर औद्योगिक सर्वेक्षणको नयाँ अड्डा खोल्ने निर्णय भएछ ।
त्यस अड्डालाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित भएछ । सत्यमोहनलगायत केशरबहादुर आचार्य, थिरबहादुर रायमाझी, धनबहादुर अधिकारी, तथा नरकान्त अधिकारी विज्ञापन प्रक्रियाबाट जागिरे भएछन् हुकुम प्रमांगीबाट होइन । जोशीजीका अनुसार वर्तमान लोक सेवा आयोगको अवधारणाको प्रारम्भ विन्दु त्यही घटना थियो ।
उहाँका अनुसार ३०/३५ जनाको दरखास्तबाट ५ जना छानिनुभयो र विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक सर्वेक्षण गर्ने अभिभारा बोकेर उहाँहरू नेपाल भ्रमणमा निस्कनु पनि भयो । सत्यमोहन जोशी औद्योगिक सर्वेक्षणका सामग्रीहरूका अतिरिक्त लोकगीत पनि बटुलेर ल्याउने काममा लाग्नुभएछ ।
उहाँका सहकर्मीहरूको त्यो समूहलाई ‘पञ्च पाण्डव’ समेत भन्ने गरिन्थ्यो । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा उहाँहरूका सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरू विशेष उपयोगी ठहरिएको प्रसंग पनि जोशीबाट सुन्न पाइयो । तर सत्यमोहन जोशीलाई संस्कृतिविद् बनाउने श्रेय भने लोकगीत संकलन गर्ने उहाँको उत्कण्ठालाई जान्छ ।
सत्यमोहन जोशीको बारेमा उहाँका सहकर्मी थिरजंगबहादुर रायमाझीले शब्द–संयोजन शतांकमा लेख्नुहुन्छ, ‘उहाँ पहिलेदेखि नै लोकगीतमा चासो राख्नुहुन्थ्यो । दिउसो अफिसको काम सकिएपछि गाउँघरमा गई गीत बटुलेर ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो ।’ गाउँघरका तिनै गीतगाथा र तीसँग जोडिएका संस्कृति र संस्कारलाई आधार बनाएर लेखेको उहाँको कृति ‘हाम्रो लोक संस्कृति’ विसं २०१३ को मदन पुरस्कार विजेता बन्यो ।
त्यसले स्थापित गरेको मान र मर्यादाले उहाँलाई २०१५ सालमा पुरातत्त्व र संस्कृति विभागको पहिलो डाइरेक्टरको फदमा नियुक्ति दिलायो । त्यसै त्रममा वीर पुस्तकालयको वैभवभित्र डुबुल्की मार्न पुग्नुभयो । त्यहाँ सुरक्षित प्राचीन मुद्राहरूको अध्ययन गरी पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा ‘नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा’ नामक अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ तयार भयो । उक्त ग्रन्थले फेरि दोस्रोपल्ट मदन पुरस्कार दिलायो २०१७ सालमा ।
नेपालभाषा एवं नेपाली भाषामा उत्तिकै कलम चलाउन सक्ने स्रष्टा सत्यमोहन जोशीको जाँगर नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति र विशेषतः लोकसंस्कृतिमा दिनपरदिन उकालो लाग्दै गर्दा २०२६ सालमा उहाँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सहसदस्यमा नियुक्त हुनुभयो ।
संस्कृति विभाग सम्हाल्ने क्रममा उहाँले नेपालको दुर्गम क्षेत्र कर्णाली अञ्चलको सिंजाखोला उपत्यकामा लोकसंस्कृतिको खोज–अनुसन्धानमा हात बढाउनुभयो । उहाँको अन्वेषण दलमा प्रा. चूडामणि बन्धु, विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, स्थिरजंगबहादुर सिंह र प्रदीप रिमाल सामेल थिए । पाँच जनाको उक्त दलले पाँचवटा गहनतम मौलिक ग्रन्थहरू तयार गरे । ‘कर्णाली, लोकसंस्कृतिको मूल’ शीर्षकमा प्रकाशित ती पाँचवटै कृतिले संयुक्त रूपमा मदन पुरस्कार २०२८ मा प्राप्त गरे । यसप्रकार सत्यमोहनज्यू तीनवटा मदन पुरस्कार पाउने एक मात्र स्रष्टा हुनुहुन्छ ।
नेपालबाहिर सत्यमोहनले जहाँ पाइला टेक्नुभयो त्यहाँ नेपालको कला र संस्कृतिको पदछाप छोडेर आउनुभयो । मित्रता र सद्भावको सौगात नेपाललाई बुझाउनुभयो । उहाँको चीन भ्रमण र त्यहाँको बसाइले नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने बौद्धिक खुराकहरू निर्माण गर्न सफल भए ।
सातौं शताब्दीमा राजकुमारी भृकुटीले र तेह्रौं शताब्दीमा कलाकार अरनिकोले नेपाली धर्म, संस्कृति र कलाकौशलको परिचय चीनमा स्थापित गरेका थिए । तिनै भृकुटी र अरनिकोलाई वर्तमान नेपालीमाझ परिचित गराउने काममा सत्यमोहनको ठूलो योगदान छ । सगरमाथालाई विश्वसामु चिनाउने काममा नेपालतर्फका तेन्जिङ नोर्गे र न्युजिल्यान्डका एड्मन्ड हिलारी सफल भए । न्युजिल्यान्डलाई नेपाली चिनाउने काम भने सत्यमोहनले पूरा गर्नुभयो ।
सत्यमोहन जोशीसँग मेरा संयोगका यथार्थहरू चार दशकदेखि कायम छ । विसं २०३६ सालमा जुन बेला उहाँले १० वर्षको कार्यकालपछि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान छोड्नुभयो । त्यहीबेला मलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सदस्यता प्राप्त भयो । मेरो पनि दस वर्षको कार्यकाल त्यहाँ बित्यो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विभिन्न कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी र समारोहमा भेट हुने नै भयो । त्यसबाट प्रभावित हुनु नै थियो र हुन्छु पनि । तर उहाँको ‘कर्णाली लोकसंस्कृति’ कृतिको प्रभाव ठूलो रह्यो किनभने मेरो डाक्टरेट थेसिस कर्णाली अञ्चलका वन–वनस्पति, उद्भिद र तिनको नक्सांकनसँग सम्बन्धित थियो ।
मेरो पहिलो अध्ययन भ्रमण २०२२ सालमा र दोस्रो भ्रमण २०३२ सालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०३४ सालमा थेसिस लेख्ने बेला कर्णाली लोकसंस्कृतिले नयाँ दृष्टिहरू थपिदिए । सम्झना बिर्सनाका कुराहरू कोट्याउँदा सत्यमोहनको भीमरथारोहणको भोजमा बकुँबहाल पुगेको थिएँ । ‘दाइया नं जंको को चाल का...’ अर्थात् ‘दाइको पनि बूढो पास्नी सम्पन्न भएछ’ भन्दा उत्तरमा भन्नुभयो, ‘न्ही वों चाः दँ बोंगु मचाखनिका’ अर्थात् ‘दिन बितेको चाल पाइयो तर वर्ष बितेको चाल पाइएन’ ।
हामी दुईको वार्ता सधैं नेपालभाषामा चल्छ । त्यत्तिकैमा उहाँले भन्नुभयो कि यो मेरो दोस्रो पास्नी हो । पहिलो पास्नी आमाको काखमा बसेर अन्नप्रासनका थियो । अहिले पनि आमाकै काखमा बसेर पास्नी गरियो । उहाँकी आमा त्यतिखेर हामीमाझमा प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो ।
विसं २०७२ साल वैशाख १४ गते मैले पनि आमाकै काखमा बसेर आफ्नो बूढो पास्नी ‘भीमरथारोहण’ कार्य सम्पन्न गरें । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले बिथोलेको सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बिर्सिएर आमाको काखले न्यानो दियो । सत्यमोहन दाइको त्यो आमाउद्गार भूकम्पका परकम्पनहरूसँगसँगै कानमा गुन्जँदै थियो ।
मदन पुरस्कार गुठी परिवारमा सत्यमोहन जोशी स्वभावतः सम्मानित व्यक्तित्व रहिआउनुभएको छ । उक्त गुठीले २०६३ सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार मलाई दिने निधो गरेको थियो । सो पुरस्कार ग्रहण गर्न जाने सिलसिलामा २०६४ साल असोज २६ गते समारोहस्थलको मञ्चमा मलाई हात समातेर डोर्‍याई लगिदिने अर्थात् गुठीको भाषामा ओल्काउने व्यक्ति सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्थ्यो । तीनपल्टसम्म मदन पुरस्कार थापेका हातको स्पर्श मेरा लागि पुरस्कारको अर्को महत्त्वपूर्ण थैली थियो ।
सत्यमोहन जोशी के कति संघ, संस्था, प्रतिष्ठान एवं विद्यालय र महाविद्यालयहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुराको छुट्टै अभिलेख बन्नुपर्छ । तर, म र मेरा परिवार आबद्ध शेष–हीरा प्रतिष्ठानको स्थापनाकाल २०५२ सालदेखि उहाँले हामीलाई पुर्‍याउनृुभएको सहयोग अविस्मरणीय छ । उक्त संस्थाले उहाँलाई निकैपल्ट विशेष सम्मान गरेको छ । हरेक कार्यक्रममा नयाँ दृष्टि, नयाँ जाँगर र नवीन विचारहरू उहाँबाट सुन्न पाइन्छ ।
तिनलाई आज समग्रमा विचार्दा मलाई विश्वास हुन्छ कि विस्मृतिको स्मृतिमा ब्युँताएर वर्तमानको विश्लेषणलाई भविष्यको काँधमा थमाइदिन सक्ने निपुण विद्वान हुनुहुन्छ सत्यमोहन जोशी । वर्तमानलाई बुझ्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने निपुणताको उदाहरण हालको हाम्रो राष्ट्रिय गानको चयन पनि हो । यो राष्ट्रिय गान ‘सयौं थुंगा फूलका हामी’ छनोट समितिको संयोजक पनि सत्यमोहन हुनुहुन्थ्यो ।
यही वैशाख ३० गते उहाँको सयौं शुभजन्मोत्सव उहाँ जन्मेकै आँगनमा सम्पन्न हुने छ होला । त्यस पवित्र स्थललाई नमन गर्दै वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको चिरायु कामना गर्दछु । यस अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले एक वर्षभरि जोशी शताब्दी जन्मोत्सव मनाउने तय गरेको छ । त्यस अवसरमा बकुँबहालको जोशी जन्मस्थलको यथोचित मर्मत सुधार तथा मुहार परिवर्तन ‘फेस लिफ्ट’ हुनेछ भन्ने मनोकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।